PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - U-DUBE-NCUBE UBONGE IZISEBENZI ZOMNYANGO
U-DUBE-NCUBE UBONGE IZISEBENZI ZOMNYANGO
Ilanga - 2018-10-29 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
BACHONYWE uphaphe lwegwalagwala nguNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa DubeNcube, abesifazane abasebenza ngaphansi komnyango wakhe ngokusebenza ngokuzikhandla, okusize ekubeni umnyango uhlomule ngezindondo ezahlukene kwiPremier’s Excellence Awards nonyaka.
Lo mcimbi wezindondo ubuseInkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC) eThekwini ngoNcwaba (August).
Umnyango kaNkk Dube-Ncube uhlabane ngeProductivity Award, yiKamoso Award - ngokuba wumnyango oweseka kakhulu uhlelo lweEPWP - yindondo yesiliva ngokuba yiBest Innovator of the Year kwathi uMnu Thando Tubane, oyinhloko kulo mnyango, wagoduka neBest Head of Department Award KwaZuluNatal.
Ekhuluma ngeledlule nabesifazane abangaphezulu kuka-800 emcimbini obuhlelelwe bona ukuxwayisa ngomdlavuza wamabele - kwazise kule nyanga kuxwayiswa ngalesi sifo - uNkk Dube-Ncube, uthe: “Nonke njengoba nilapha, likhona iqhaza elithile enilibambile njengoba sihlomule ngalezi zindondo.
“Wukusebenza kwenu ngokukhulu ukuzikhandla okusenze saphuma phambili kule mikhakha esihlabene kuyona. Lokhu masikusebenzise, sakhele phezulu kwakho ukuba siqhubekele phambili njengoba imiphakathi eminingi ithembele kakhulu komasipala nakubaholi bendabuko.”
Kulo mcimbi uNkk Dube-Ncube unxuse abesifazane ukuba baqinisekise ukuthi bahlolelwa umdlavuza webele kusenesikhathi.
ISITHOMBE: SITHUNYELWE ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UMROZA Fakude ukhala ngokuhlukumezeka ebulawa ephila.